Bebe Rexha ကို ကာကွယ်ပြောဆိုပေးလိုက်ကြတဲ့ Taylor Swift နဲ့ Rita Ora - Myanmarload
Bebe Rexha ကို ကာကွယ်ပြောဆိုပေးလိုက်ကြတဲ့ Taylor Swift နဲ့ Rita Ora
လွန်ခဲ့သော ၄ လ က 15:37 August 14, 2019
ပရိသတ်တွေတော်တော်များများ အထူးသဖြင့် ယောကျ်ားလေးတော်တော်များများဟာဆိုရင် Bebe Rexha ကိုသိကြမှာပါ။ သူမရဲ့အသက်ဟာဆိုရင် ခုချိန်မှာ ၂၉နှစ်ရှိပြီးဖြစ်ကာ သြဂုတ်လ ၃၀မှာ အသက် ၃၀ပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လဲ သူမဟာ လှပလျက်ရှိတာကို ပရိသတ်ကြီးလဲ သိကြမှာပါ။ သူမရဲ့ Body က အသက် ၂၉လို့ပြောပြမရအောင် ကြည့်ကောင်းတဲ့ သူပါ။
တနင်္လာနေ့တုန်းကဆိုရင်လဲ သူမဟာ Instagram မှာ သူမရဲ့ Sexy ပုံကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တင်ခဲ့တဲ့ ပုံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမကို လူတစ်ယောက်က အဲ့လိုပုံတွေ တင်ဖို့ အရမ်းအသက်ကြီးနေပြီလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုကြောင့် အသက် ၂၉နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Taylor Swift နဲ့ အသက် ၂၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Rita Ora တို့က Bebe ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောလဲပြောသင့်ပါတယ်....Bebe က အသက်မှမကြီးသေးပဲကို။
Taylor ရေးခဲ့တာကတော့ 'DRAG THEM,' ဆိုပြီး အကုန်လုံးကို အက္ခရာအကြီးနဲ့ပဲရေးတာ အဲ့နောက်မှာတော့ '29 YEAR OLDS UNITE,' ဆိုပြီးရေးကာ အနောက်မှာ အသည်းနှလုံးပုံ ၁၃ခုကိုပါ ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ Rita ကတော့ 'My sexy songwriting [queen]. You are beautiful, getting sexier with age and your talent SINGS for itself. Keep making those rules,' ဆိုပြီး ချီးကျူးပြီးရေးခဲ့ကာ နောက်မှာ အသည်းနှလုံးပုံလေးထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ Fifth Harmony အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lauren Jauregui ကလဲ 'LET EM NO MAMA,' ဆိုပြီး Bebe ကို ဝန်းရံနေကြပါတယ်။
Page generated in 0.1363 seconds with5database query and6memcached query.